Puntland oo arruurinaysa saamaynta ay masiibadu ku reebtay kalluumaysatada xeebaha (Dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 19, 2013 6:31 b 0
Boosaaso, November 19, 2013 – Roobabkii qabowga badnaa ee ka da?ay xeebaha iyo dhulka taaga ah ee gobollada Nugaal, Karkaar iyo Guardafu ?ee Puntland ayaa waxaa weli ka soo baxaya warar kala duwan oo tilmaamaya saamaynta ay reebeen.
Wasaaradda kalluumaysiga iyo Khayraadka badda ee Puntland ayaa shaacisay in jiraan raadad adag oo ay kalluumaysatada ku reebeen ?roobabkii ka da?ay gobollada Puntland, waxaa jira hanti badeed badan oo ay roobabku la tageen, iyo weliba kalluumaysato badda ku dhintay.
?Xiriiro kala duwan baan samaynay welina baaristu waa socota, doon ay saarnaayeen dhowr Soomaali ah baa lagu waayey aaga Bayla, doon kale isla halkaas baa lagu badbaadiyey dad Carab ah baa saarnaa iyadana, laakiin hanti badan baa roobabku la tageen sida la hubo.? Ayuu yiri wasiir ku xigeenka Kalluumaysiga Muuse Geelle Yuusuf oo daljir la hadlay.
Wasaaradda Kalluumaysiga ee Puntland waxaa ay sheegtay in ay dhowaan shaacin doonto tirada guud ee dadka dhintay iyo hantida burburtay, waxaa weli la arruurinayaa macluumaad la xiriira arrintaas oo ka socda dhulka xeebaha ee Garacad ilaa Laasqoray iyo inta u dhexeysa.
Dhegeyso: Xaliimo sacdiyo oo daljir ka tirsan ayaa waraysatay wasiir ku xigeenka Kalluumaysiga?